परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम् १ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा सङ्‍गति गर्दैछौँ। परमेश्‍वरको कामको प्रारम्भदेखि नै यस विषयमा छलफल हुँदै आएको छ र जुनचाहिँ हरेक व्यक्तिको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को शब्दमा, यो यस्तो विषय हो जससँग परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने क्रममा हरेकले सामना गर्नुपर्ने छ; यो सामना गर्नै पर्ने विषय हो। यो महत्त्वपूर्ण, अपरिहार्य विषय हो जसबाट मानवजाति टाढा जानै सक्दैन। महत्त्वको कुरा गर्दा, परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने हरेकको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्‍नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर केही मानिसहरू सोच्छन्; परमेश्‍वरका वचनहरू अझ बढी खानु र पिउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर केहीले विश्‍वास गर्छन्; आफैँलाई चिन्‍नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनी केहीले महसुस गर्छन्; परमेश्‍वरद्वारा कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने, परमेश्‍वरलाई कसरी पछ्याउने र परमेश्‍वरको इच्छा कसरी पूरा गर्ने भन्‍ने कुरा जान्‍नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्‍ने अन्यको धारणा छ। आज हामी यी सबै विषयहरूलाई अलग राख्‍ने छौँ। त्यसो भए आज हामी के कुराको बारेमा छलफल गर्दैछौँ? यसको विषयचाहिँ परमेश्‍वर हो। के यो सबै मानिसहरूको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो? यस विषयमा के कुरा समावेश हुन्छ? अवश्य नै, यसलाई परमेश्‍वरको स्वभाव, परमेश्‍वरको सार र परमेश्‍वरको कामबाट अलग राख्‍न सकिन्‍न। यसैले आज “परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम्” को बारेमा छलफल गरौँ।
मानिसले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न सुरु गरेको समयदेखि नै, परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम् जस्ता विषयहरूको तिनीहरूले सामना गरेका छन्। परमेश्‍वरको कामको बारेमा कुरा गर्दा, केही मानिसहरूले यसो भन्‍ने छन्ः “परमेश्‍वरको काम हामीमा गरिन्छ; हामीले यसको अनुभव दैनिक गर्छौँ, त्यसैले हामी यससँग अपरिचित छैनौँ।” परमेश्‍वरको स्वभावको बारेमा कुरा गर्दा, केहीले यसो भन्‍ने छन्ः “परमेश्‍वरको स्वभाव हाम्रो सम्पूर्ण जीवनभर हामीले अध्ययन, अन्वेषण र ध्यान दिने विषय हो, यसैले यससँग हामी परिचित हुनै पर्छ।” परमेश्‍वर स्वयम्‌को बारेमा कुरा गर्दा, केहीले भन्‍ने छन्ः “हामीले पछ्याउने, हामीले विश्‍वास गर्ने र हामीले खोजी गर्ने परमेश्‍वर स्वयम्‌लाई नै हो; न त हामी उहाँको बारेमा अनभिज्ञ नै छौँ।” परमेश्‍वरले सृष्टिदेखि आफ्नो काम कहिले रोक्‍नुभएको छैन; आफ्नो कामको दौरानमा उहाँले आफ्नो स्वभावलाई व्यक्त गर्ने कार्य जारी राख्नुभएको छ र आफ्नो वचनलाई व्यक्त गर्ने विभिन्‍न माध्यमहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। उही समयमा, उहाँले आफैँलाई र आफ्नो सारलाई मानवजातिकहाँ व्यक्त गर्ने कार्य, मानिसप्रतिको उहाँको इच्छा र मानिसबाट उहाँले चाहेको कुरालाई व्यक्त गर्ने कार्यलाई उहाँले कहिले पनि रोक्‍नुभएको छैन। यसैले, शाब्दिक रूपले भन्‍नुपर्दा, यी विषयहरूमा कोही पनि अपरिचित छैन। तैपनि, आज परमेश्‍वरलाई पछ्याउने मानिसहरूको लागि भने, परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम् सबै वास्तवमा धेरै बिराना कुराहरू हुन्। किन यस्तो हो? मानिसले परमेश्‍वरको कामको अनुभव गर्दा, तिनीहरू परमेश्‍वरको सम्पर्कमा पनि आउँछन्, यसले तिनीहरूले परमेश्‍वरको स्वभाव बुझेको वा तिनीहरूले उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्‍ने कुराको केही ज्ञान महसुस तिनीहरूलाई गराउँछ। यसै गरी, मानिसले परमेश्‍वरको काम वा परमेश्‍वरको स्वभावसँग आफू अपरिचित छु भन्‍ने सोच्दैन। परन्तु, मानिसले आफू परमेश्‍वरसँग एकदमै परिचित भएको र परमेश्‍वरको बारेमा धेरै आफूलाई थाहा भएको ठान्छ। तर वर्तमान परिस्थितिमा, परमेश्‍वर बारेको यो बुझाइ, अन्य जस्तै, तिनीहरूले पुस्तकहरूमा पढेको कुरामा सीमित छ, व्यक्तिगत अनुभवमा सीमित छ, कल्पनामा सीमित छ, र तीभन्दा बढी त, तिनीहरूका आफ्नै आँखाले देखेका तथ्यहरूमा सीमित छ—ती सबै सत्य परमेश्‍वर स्वयम्‌ देखि टाढा छन्। र यो “टाढा” कति टाढा छ? सायद मानिस आफैँलाई निश्‍चित छैन, वा सायद मानिसलाई थोरै थाहा छ अर्थात् आभास छ—तर जब परमेश्‍वर स्वयम्‌को कुरा आउँछ, साँचो परमेश्‍वर स्वयम्‌को सारको बारेमा मानिसको बुझाइ धेरै टाढा छ। यसैले, “परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम्” जस्तो विषयको निम्ति हामी व्यवस्थित र ठोस तवरले सङ्‍गतिमा रहनु अपरिहार्य छ।
वास्तवमा, परमेश्‍वरको स्वभाव सबैका निम्ति खुला छ र लुकेको छैन, किनकि परमेश्‍वरले कहिले पनि जानाजान कुनै व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्नुभएको छैन र मानिसहरूले उहाँलाई नचिनून् वा नबुझून् भनेर जानाजान कहिले पनि आफूलाई लुकाउनुभएको छैन। जहिले पनि खुला रहनु र खुला रूपले हरेक व्यक्तिको सामना गर्नु परमेश्‍वरको स्वभाव हो। परमेश्‍वरको व्यवस्थापनमा, हरेकको सामना गरेर परमेश्‍वरले उहाँको काम गर्नुहुन्छ र हरेक व्यक्तिमा उहाँको काम गरिन्छ। उहाँले यो काम गर्ने क्रममा, हरेक व्यक्तिलाई दिशानिर्देश गर्न र उपलब्ध गराउनको निम्ति उहाँले आफ्नो स्वभावलाई निरन्तर रूपमा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो सार, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ, ती कुरा को प्रयोग निरन्तर रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक युग र हरेक चरणमा, परिस्थितिहरू असल र खराब जस्ता भए पनि, परमेश्‍वरको स्वभाव हरेकको निम्ति सधैँ खुला छ र उहाँको सम्पत्तिहरू र अस्तित्व हरेकको लागि सधैँ खुला छन्, जसरी उहाँको जीवन नित्य र अटुट रूपमा मानवजातिको निम्ति उपलब्ध गराइरहेको र सहायता गरिरहेको छ। यी सबैको बाबजुद, केहीको निम्ति परमेश्‍वरको स्वभाव गुप्त नै रहन्छ। किन? किनकि यी मानिसहरू परमेश्‍वरको कामभित्र नै जिउने र परमेश्‍वरलाई पछ्याउने भएता पनि, तिनीहरूले कहिले पनि परमेश्‍वरलाई बुझ्‍न खोजेका छैनन् न त उहाँलाई चिन्‍न नै चाहेका छन्, तिनीहरू परमेश्‍वरको नजिक जाने त कुरै नगरौँ। ती मानिसहरूको निम्ति, परमेश्‍वरको स्वभाव जान्‍नु तिनीहरूको अन्त्य नजिक छ भन्‍ने कुराको सङ्‍केत हो; यसको अर्थ परमेश्‍वरको स्वभावद्वारा तिनीहरूको न्याय गरिन र दोषी ठहर्‍याइन लागेको छ भन्ने हुन्छ। यसर्थ, तिनीहरूले कहिले पनि परमेश्‍वर वा उहाँको स्वभावलाई बुझ्‍ने इच्छा गरेका छैनन्, न त परमेश्‍वरको इच्छाको गहिरो समझ वा ज्ञानको लालच नै गरेका छन्। तिनीहरूले सचेत साझेदारीको माध्यमबाट परमेश्‍वरको इच्छालाई बुझ्‍न खोज्दैनन्—तिनीहरूले जहिले पनि आनन्द मात्रै मनाउँछन् र तिनीहरूले गर्न चाहेको कुरा गर्नबाट कहिले पनि थाक्दैनन्; तिनीहरूले विश्‍वास गर्न चाहेको परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्; तिनीहरूका कल्पनाहरूमा मात्र अस्तित्वमा रहनुभएका परमेश्‍वरमा, तिनीहरूका धारणामा मात्र अस्तित्वमा रहनुभएको परमेश्‍वरलाई विश्‍वास गर्छन्; र तिनीहरूको दैनिक जीवनमा तिनीहरूबाट अलग नहनुभएका परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्। तर जब साँचो परमेश्‍वर स्वयम्‌को कुरा आउँछ तिनीहरू त्यसलाई पूर्ण रूपमा महत्त्वहीन ठान्छन् र उहाँलाई बुझ्‍ने वा उहाँलाई ध्यान दिने कुनै पनि चाहना तिनीहरूमा हुँदैन र उहाँको नजिकमा जाने इच्छाको त कुरै नगरौँ। तिनीहरूले परमेश्‍वरले व्यक्त गर्नुभएका वचनहरूलाई आफ्नो सजावटको निम्ति, आफैँलाई सुन्दर देखाउनको लागि मात्र प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूको विचारमा, यसले तिनीहरूलाई पहिले नै सफल विश्‍वासीहरू र आफ्ना हृदयमा परमेश्‍वरप्रति विश्‍वास भएका मानिसहरू बनाउँछ। तिनीहरूका हृदयमा तिनीहरूका कल्पना, तिनीहरूका धारणा र परमेश्‍वरसम्बन्धि आफ्नै व्यक्तिगत परिभाषाहरूद्वारा तिनीहरू निर्देशित छन्। अर्कोतिर, साँचो परमेश्‍वर स्वयम्‌प्रति चाहिँ तिनीहरूको कुनै सरोकार छैन। किनकि, साँचो परमेश्‍वर स्वयम्‌लाई तिनीहरूले बुझ्‍ने, परमेश्‍वरको साँचो स्वभावलाई बुझ्‍ने र परमेश्‍वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा बुझ्ने भएका भए, यसको अर्थ यही हुन्थ्यो कि तिनीहरूका कामहरू, तिनीहरूको विश्‍वास र तिनीहरूका खोजहरू दोषी ठहरिने थिए। यसैले तिनीहरू परमेश्‍वरको सार बुझ्‍न अनिच्छुक छन् र परमेश्‍वरलाई सक्रिय रूपमा खोज्‍न वा अझ राम्ररी परमेश्‍वरलाई बुझ्‍नको निम्ति प्रार्थना गर्न, परमेश्‍वरको इच्छा अझ राम्ररी जान्‍न र परमेश्‍वरको स्वभाव अझ राम्ररी बुझ्‍न तिनीहरू अनिच्छुक छन्। बरु तिनीहरू बनाइएको, खोक्रो र अस्पष्ट परमेश्‍वर चाहन्छन्। बरु परमेश्‍वर तिनीहरूले कल्पना गरे जस्तो भएको, तिनीहरूले चाहेको बेलामा जे पनि गरिदिन सक्‍ने, अक्षय रूपमा पूर्ति गर्न सक्‍ने र सधैँ उपलब्ध हुने जन भएको चाहन्छन्। तिनीहरूले परमेश्‍वरको अनुग्रहको आनन्द लिन चाहँदा, परमेश्‍वर त्यो अनुग्रह बनेको तिनीहरू चाहन्छन्। तिनीहरूलाई परमेश्‍वरको आशिष्‌को आवश्यकता पर्दा परमेश्‍वर त्यो आशिष्‌ बनेको तिनीहरू चाहन्छन्। प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा, तिनीहरूको पछिल्लो भागको ढाल बनेर तिनीहरूलाई निर्भीक बनाउनु भएको होस् भनेर परमेश्‍वरसँग माग्छन्। यी मानिसहरूको परमेश्‍वर बारेको ज्ञान अनुग्रह र आशिष्‌को परिधिभित्र अड्केको छ। परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम् बारेको तिनीहरूको समझ तिनीहरूकै कल्पनाहरू, अक्षरहरू र सिद्धान्तहरूमा मात्र सीमित छन्। तर परमेश्‍वरको स्वभाव जान्‍न उत्सुक, परमेश्‍वर स्वयम्‌लाई साँच्चिकै देख्‍न चाहने, र साँचो रूपमा परमेश्‍वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा बुझ्‍न खोज्‍ने केही मानिसहरू छन्। यी मानिसहरू सत्यको वास्तविकता र परमेश्‍वरबाट प्राप्त मुक्तिको खोजीमा छन् र परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त विजय, मुक्ति र सिद्धताको खोजी गर्छन्। तिनीहरू परमेश्‍वरको वचन पढ्नलाई आफ्ना हृदयको प्रयोग गर्छन्, परमेश्‍वरले तिनीहरूको निम्ति प्रबन्ध गर्नुभएको हरेक परिस्थिति र हरेक व्यक्ति, घटना र वस्तुको कदर गर्नको निम्ति आफ्ना हृदयको प्रयोग गर्छन् र तिनीहरू इमानदारीसाथ प्रार्थना गर्छन् र खोज्छन्। तिनीहरूले सबैभन्दा धेरै जान्‍न चाहेको कुरा परमेश्‍वरको इच्छा हो, र तिनीहरूले सबैभन्दा धेरै बुझ्‍न चाहेको कुरा परमेश्‍वरको साँचो स्वभाव र सार हो, ताकि तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई अपमानित नगरून् र आफ्ना अनुभवहरूद्वारा अधिक रूपमा परमेश्‍वरको सुन्दरता र उहाँको साँचो पक्ष देख्‍न सकून्। यस्तो पनि हो कि साँचो रूपमा वास्तविक परमेश्‍वर तिनीहरूको हृदयहरूमा हुनुहुनेछ, र परमेश्‍वर तिनीहरूको हृदयहरूमा बास गर्नुहुनेछ, यसरी तिनीहरू कल्पना, धारणाहरू वा अस्पष्टतामा जिउने छैनन्। यी मानिसहरूमा परमेश्‍वरको स्वभाव र सार जान्‍ने उत्कट इच्छा हुनुको कारण यही हो कि मानवजातिको अनुभवको दौरानमा तिनीहरूलाई हरेक पल परमेश्‍वरको स्वभाव र सारको जरुरत पर्छ; कुनै व्यक्तिको जीवनभर जीवनको पूर्ति गर्ने काम उहाँको स्वभाव र सारले नै गर्छ। तिनीहरूले परमेश्‍वरको सार बुझेपछि, तिनीहरू परमेश्‍वरको अझ आदर गर्न सक्षम हुन्छन्, परमेश्‍वरको काममा अझ सहकार्य गर्छन्, र परमेश्‍वरको इच्छाप्रति अझ विचारवान् हुन्छन् र तिनीहरूको क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्छन्। दुई किसिमका मानिसहरूले परमेश्‍वरको स्वभावप्रति राखेको मनोवृत्तिहरू यस्ता छन्। पहिलो प्रकारले परमेश्‍वरको स्वभाव बुझ्‍न चाहँदैन। तिनीहरूले परमेश्‍वरको स्वभाव जान्‍न चाहन्छ, परमेश्‍वर स्वयम्‌लाई अर्थात् परमेश्‍वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा जान्‍न चाहन्छ र साँचो रूपमा परमेश्‍वरको इच्छाको कदर गर्छौँ भनेता पनि, भित्र गहिराइबाट परमेश्‍वरको अस्तित्व नभएको तिनीहरू चाहन्छन्। किनभने यस्ता किसिमका मानिसहरू निरन्तर परमेश्‍वरको अवज्ञा र विरोध गर्छन्; तिनीहरूका आफ्नै हृदयमा ओहोदाको निम्ति परमेश्‍वरसँग लडाइँ गर्छन् र परमेश्‍वरको अस्तित्वमाथि प्रायः शङ्‍का गर्छन् वा इन्कार गर्छन्। परमेश्‍वरको स्वभाव वा साँचो परमेश्‍वर स्वयम्‌ले तिनीहरूको हृदयमा बास गरेको तिनीहरू चाहँदैनन्। तिनीहरूका केवल आफ्नै इच्छा, कल्पना र महत्वाकांक्षा मात्र पूरा गर्न चाहन्छन्। यसैले, यी मानिसहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न सक्छन्, परमेश्‍वरलाई पछ्याउन सक्छन् र उहाँको निम्ति आफ्ना परिवार र जागिरहरू पनि छोड्न सक्छन्, तर तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट मार्गहरूलाई छोड्दैनन्। केहीले भेटी चोर्छन् वा फजुल खर्च गर्छन्, वा गुप्तमा परमेश्‍वरलाई सराप्छन् भने, अन्यले आफ्नै गवाही दिन, आफ्नै बढाइचढाइ गर्न तथा मानिसहरू र हैसियतको निम्ति परमेश्‍वरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति बारम्बार आफ्ना पदहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छन्। तिनीहरूलाई मानिसहरू ले पुजून् भनेर अनेक विधि र उपायहरूको प्रयोग गर्छन्, मानिसहरूलाई जित्‍न र तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन निरन्तर प्रयास गर्छन्। केहीले आफूलाई परमेश्‍वर ठानेर र तिनीहरूलाई परमेश्‍वरलाई झैँ व्यवहार गरिनुपर्छ भनेर जानीजानी मानिसहरूलाई बहकाउँछन् पनि। तिनीहरूले आफू भ्रष्ट भएको कुरा कहिले पनि कसैलाई बताउँदैन्—कि तिनीहरू ज्यादै भ्रष्ट र अहंकारी भएको कारण तिनीहरूलाई पुजून् र तिनीहरूले जति नै असल गरेता पनि त्यो सबै परमेश्‍वरलाई उच्च पार्ने कामको कारणले हो र तिनीहरूले त आफूले गर्नुपर्ने कुरा मात्र गरेका हुन्। तिनीहरूले यीकुराहरू किन भन्दैनन्? किनकि मानिसहरूको हृदयबाट आफ्नो स्थान गुम्छ कि भन्‍ने गहिरो डर तिनीहरूमा छ। यसैले यस्ता मानिसहरूले कहिले पनि परमेश्‍वरलाई उच्च पार्दैनन् र परमेश्‍वरको गवाही कहिले पनि बन्दैनन्, किनकि तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई बुझ्‍ने प्रयास कहिले पनि गरेनन्। के तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई नबुझीकन उहाँलाई चिन्‍न सक्छन्? असम्भव! यसैले, “परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम्” विषयका शब्दहरू सामान्य हुन सक्छन्, तिनको अर्थ हरेक व्यक्तिका निम्ति फरक हुन्छ। बारम्बार परमेश्‍वरको अवज्ञा गर्ने, परमेश्‍वरको विरोध गर्ने, र परमेश्‍वरप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने व्यक्तिको निम्ति भने, ती वचनहरूले दण्डको सङ्‍केत गर्छन्; जबकि सत्यता वास्तविकताको खोजी गर्ने र परमेश्‍वरको इच्छा खोज्‍न अक्सर परमेश्‍वरको सामु आउने व्यक्तिले माछाले पानीलाई जसरी लिन्छ त्यसरी नै यस्ता वचनहरूलाई लिन्छ। तर तिमीहरूका बीचमा यस्ता पनि छन्, जसलाई परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वरको कामको बारेमा सुन्दा टाउको दुख्‍न सुरु हुन्छ, तिनीहरूको हृदय विरोधले पूर्ण हुन्छ, र तिनीहरूले अत्यन्तै असहज महसुस गर्छन्। तर तिमीहरूका बीचमा यस्तो सोच्‍ने अन्य व्यक्तिहरू पनि छन्ः यो ठ्याक्कै मलाई चाहिने विषय हो, किनकि यो विषय मेरो लागि धेरै फाइदाजनक छ। यो मेरो जीवनको अनुभवबाट गुमाउन नसक्ने केही कुरा हो; यो महत्त्वपूर्णभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, परमेश्‍वरमा गरिने विश्‍वासको जग, र मानवजातिले त्याग्‍न नसक्ने केही कुरा हो। तिमीहरू सबैको निम्ति यो विषय नजिक र टाढा, अपरिचत तापनि परिचित दुवै लाग्‍न सक्छ। तर जे भए पनि यो सबैले सुन्‍नै पर्ने, जान्‍नै पर्ने र बुझ्‍नै पर्ने विषय हो। तैँले यसलाई जस्तो व्यवहार गरेता पनि, यसलाई तैँले जसरी हेरेता पनि वा यसलाई जसरी बुझेता पनि, यस विषयको महत्त्वलाई उपेक्षा गर्न सकिन्‍न।
परमेश्‍वरले मानवजातिको सृष्टिदेखि नै आफ्नो काम गर्दै आउनुभएको छ। सुरुमा यो एकदमै सरल काम थियो, तर सरलताको बाबजुद, यसमा परमेश्‍वरको सार र स्वभावको अभिव्यक्ति सामेल थियो। जबकि अहिले परमेश्‍वरको कामको उत्थान भएको छ, र उहाँको वचनको महान् अभिव्यक्तिका साथ उहाँलाई पछ्याउने हरेक व्यक्तिमा यो काम आसाधारण र ठोस बनेको छ भने, यस दौरानमा परमेश्‍वरको व्यक्तित्व मानवजातिबाट लुकेको छ। उहाँ दुई पटक देहधारी हुनुभयो, तापनि बाइबलीय वृतान्तहरूदेखि लिएर आधुनिक समयसम्म कसले परमेश्‍वरको वास्तविक व्यक्तित्व देखेको छ? तिमीहरूको समझको आधारमा, के कसैले परमेश्‍वरको वास्तविक व्यक्तित्व देखेको छ? छैन। कसैले पनि परमेश्‍वरको वास्तविक व्यक्तित्व देखेको छैन, अर्थात् कसैले पनि परमेश्‍वरको साँचो व्यक्तित्व देखेको छैन। यस कुरामा सबै सहमत छन्। यसको अर्थ यही हो कि परमेश्‍वरको वास्तविक व्यक्तित्व, वा परमेश्‍वरका आत्मा उहाँले सृष्टि गर्नुभएका आदम र हव्वा तथा उहाँले स्वीकार गर्नुभएका धर्मी अय्यूब लगायत सारा मानवजातिदेखि लुकेको छ। तिनीहरूमध्ये कसैले पनि परमेश्‍वरको वास्तविक व्यक्तित्व देखेनन्। तर परमेश्‍वरले आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्वलाई किन जानाजान लुकाउनुहुन्छ? केही मानिसहरू भन्छन्ः “मानिसहरू तर्सिन्छन् कि भनेर परमेश्‍वर डराउनुहुन्छ।” अरू भन्छन्ः “मानिस अति नै सानो र परमेश्‍वर अति नै महान् भएको कारण परमेश्‍वरले आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्व लुकाउनुहुन्छ; मानवले उहाँलाई नदेख्‍न सक्छन्, नत्रता तिनीहरू मर्ने छन्।” यसो भन्‍नेहरू पनि छन्ः “परमेश्‍वर हरेक दिन आफ्नो कामको व्यवस्थापनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, र अरूले देख्‍ने गरी देखा पर्ने उहाँसँग समय नहुन सक्छ।” तिमीहरूले जे विश्‍वास गरेता पनि, मेरो निष्कर्ष यहाँ छ। त्यो निष्कर्ष के हो? त्यो यही हो कि मानिसहरूले उहाँको वास्तविक व्यक्तित्व देखेको परमेश्‍वर चाहनुहुन्‍न। मानवताबाट लुकेर रहने कार्य नै परमेश्‍वरले जानाजान गर्ने कार्य हो। अर्को शब्दमा, उहाँको वास्तविक व्यक्तित्व मानिसहरूले नदेखून् भन्‍ने परमेश्‍वरको अभिप्राय छ। यो कुरा तिमीहरूलाई अहिलेसम्ममा स्पष्ट हुनुपर्ने हो। यदि परमेश्‍वरले आफ्नो व्यकित्व कसैलाई कहिल्यै पनि प्रकट गर्नुभएको छैन भने, के परमेश्‍वरको व्यक्तित्व अस्तित्वमा छ भन्‍ने तिमीहरू सोच्छौ? (उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ।) अवश्य उहाँ हुनुहुन्छ। परमेश्‍वरको व्यक्तित्वको अस्तित्व सबै शंकादेखि बाहिर छ। तर परमेश्‍वरको व्यक्तित्व कति महान् छ वा उहाँ कस्तो देखिनुहुन्छ भन्‍ने सन्दर्भमा, के मानवजातिले यी प्रश्‍नहरूको छानबिन गर्नुपर्छ? पर्दैन। यसको जवाफ नकारात्मक छ। यदि परमेश्‍वरको व्यक्तित्व हाम्रो खोजको विषय होइन भने, केचाहिँ हो त? (परमेश्‍वरको स्वभाव।) (परमेश्‍वरको काम।) तथापि औपचारिक विषयको बारेमा सङ्‍गति गर्नु अगाडि, केही समय अगाडि हामीले छलफल गरिरहेको कुरामा फर्कौँ: परमेश्‍वरले आफ्नो व्यक्तित्व मानवजातिकहाँ किन कहिले पनि प्रकट गर्नुभएको छैन? परमेश्‍वरले किन उहाँको व्यक्तित्व जानाजान मानवजातिदेखि लुकाउनुहुन्छ? यसको एउटै कारण छ र त्यो यो होः परमेश्‍वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसले हजारौँ वर्षको उहाँको कामको अनुभव गरेको भए तापनि, परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वरको सार बुझ्‍ने एक जना पनि छैन। परमेश्‍वरको नजरमा, त्यस्ता मानिसहरू उहाँको विरुद्धमा हुन्छन् र उहाँको विरुद्ध लाग्‍ने मानिसहरूलाई उहाँले आफैँलाई देखाउनुहुन्‍न। परमेश्‍वरले उहाँको व्यक्तित्व मानवजातिकहाँ प्रकट नगर्नुको र उहाँले आफ्नो व्यक्तित्व जानाजान मानवजातिबाट लुकाउनुको एउटै कारण यही हो। के अब परमेश्‍वरको स्वभाव जान्‍नुको महत्त्व तिमीहरूलाई स्पष्ट भयो?
राज्यको युगमा, पहिले जसरी नै, परमेश्‍वर फेरि एक पटक देह बन्‍नुभयो। कामको यस अवधिमा, परमेश्‍वरले अझै खुला रूपमा उहाँका वचन अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ, उहाँले गर्नुपर्ने काम गर्नुहुन्छ र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। यसको साथै, उहाँले मानिसको अनाज्ञाकारिता र अज्ञानतालाई झेल्‍ने र सहने काम निरन्तर गर्नुहुन्छ। के परमेश्‍वरले यस कामको अवधिमा पनि आफ्नो स्वभावलाई प्रकट गर्ने र उहाँको इच्छालाई अभिव्यक्त गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुहुन्‍न र? यसैले, मानिसको सृष्टिको सुरुदेखि अहिलेसम्म, परमेश्‍वरको स्वभाव, उहाँको अस्तित्व र सम्पत्तिहरू र उहाँको इच्छा हरेक मानिसको निम्ति सधैँ खुला रहिआएको छ। परमेश्‍वरले कहिले पनि जानाजान उहाँको सार, उहाँको स्वभाव वा उहाँको इच्छालाई लुकाउनुभएको छैन। मानवजातिले परमेश्‍वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको इच्छा के हो भन्‍ने कुराको वास्ता नराखेको मात्र हो—यसैले मानिससँग परमेश्‍वरको बारेमा यस्तो अपर्याप्त बुझाइ छ। अर्को शब्दमा, परमेश्‍वरले आफ्नो व्यक्तित्वलाई लुकाउँदै गर्दा हरेक पटक उहाँको इच्छा, स्वभाव र सारलाई हरबखत खुला रूपमा प्रस्तुत गर्दै उहाँ मानवजातिको सामु खडा भइरहेको हुनुहुन्छ। एक अर्थमा, परमेश्‍वरको व्यक्तित्व मानिसहरूको निम्ति पनि खुला छ, तर मानिसको अन्धोपन र अनाज्ञाकारिताको कारणले, तिनीहरूले परमेश्‍वर देखा पर्ने घटनालाई कहिले पनि देख्‍न सक्दैनन्। यसैले यदि त्यसो हो भने, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम्‌लाई बुझ्‍ने सबैको निम्ति सजिलो हुनुपर्ने होइन र? यो जवाफ दिनलाई धेरै कठिन प्रश्‍न हो, होइन र? तिमीहरू भन्छौ यो सजिलो छ, तर जब केही मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई जान्‍न खोज्छन्, वास्तवमा तिनीहरूले उहाँलाई जान्‍न वा उहाँको बारेमा स्पष्ट रूपले बुझ्‍न सक्दैनन्—यो सधैँ धमिलो र अस्पष्ट छ। तर यो सजिलो छैन भनी तिमीहरू भन्छौ भने, त्यो पनि सही होइन। यति लामो समयसम्म परमेश्‍वरको कामको विषय भएको कारण, आफ्ना अनुभवहरूद्वारा सबैले परमेश्‍वरसँग साँचो व्यवहार गरेको हुनुपर्ने हो। तिनीहरूले आफ्ना हृदयमा केही हदसम्म परमेश्‍वरको अनुभूति गरेका वा परमेश्‍वरको आत्मिक छुवाइको महसुस गरेका हुनुपर्ने हो, र तिनीहरूले कम्तिमा पनि परमेश्‍वरको स्वभावको बारेमा केही अवधारणात्मक जागरूकता प्राप्त गरेका वा उहाँको बारेमा केही बुझेका हुनुपर्ने हो। मानिसले परमेश्‍वरलाई पछ्याउन थालेको समयदेखि अहिलेसम्म, मानवजातिले ज्यादै धेरै प्राप्त गरेको छ, तर मानिसको कमजोर योग्यता, अज्ञानता, विद्रोह र विविध अभिप्रायहरूजस्ता कारणहरूले गर्दा मानवजातिले तीमध्ये धेरै गुमाएको पनि छ। के परमेश्‍वरले मानवजातिलाई पहिले नै प्रशस्त दिनुभएको छैन र? परमेश्‍वरले मानवजातिबाट आफ्नो व्यक्तित्व लुकाउनुभएता पनि, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ ती सबै र उहाँको जीवन मानवको निम्ति उपलब्ध गराउनुहुन्छ; मानवजातिमा परमेश्‍वर बारेको ज्ञान अहिले भएको जस्तो मात्र हुनु नपर्ने हो। यसैले परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम् विषयमा तिमीहरूसँग थप सङ्‍गति गर्नुपर्ने जरुरत छ भन्‍ने मलाई लाग्छ। परमेश्‍वरले मानिसमा लगानी गर्नुभएको हजारौँ वर्षको वास्ता र ख्याल खेर नजाओस् र मानवजातिले तिनीहरूप्रतिको परमेश्‍वरको इच्छालाई साँचो रूपमा बुझ्‍न र सराहना गर्न सकोस् भन्‍ने यसको उद्देश्य हो। ताकि मानिसहरू परमेश्‍वर बारेको तिनीहरूको बुझाइमा अर्को चरणमा प्रवेश गर्न सकोस् भन्ने हो। यसले परमेश्‍वरलाई मानिसहरूको हृदयहरूमा उहाँको वास्तविक स्थानमा परमेश्‍वरलाई फर्काउने पनि छ; अर्थात् परमेश्‍वरलाई इन्साफ पुर्‍याउने छ।
परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम्‌को बारेमा बुझ्‍नको निम्ति, तैँले सानो सुरुवात गर्नुपर्छ। तर कहाँबाट सानो सुरुवात गर्ने? सुरुवात गर्नको निम्ति, मैले बाइबलबाट केही अध्यायहरू छानेको छु। तल दिइएको जानकारीमा बाइबलका पदहरू समावेश गरिएका छन्, ती सबै परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम् बारेको विषयसँग सम्बन्धित छन्। परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम्को बारेमा बुझ्‍नको निम्ति तिमीहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति मैले विशेषगरी सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा यी उद्धृत खण्डहरू भेटाएको छु। यिनीहरूमा सहभागी भएर, परमेश्‍वरले आफ्ना विगतका कामद्वारा कस्तो किसिमको परमेश्‍वरको स्वभाव प्रकट गर्नुभएको छ र उहाँको सारका कुन पक्षहरू मानिसका लागि अज्ञात छन् भन्‍ने कुरा देख्‍न सक्ने छौँ। यी अध्यायहरू पुराना हुन सक्छन्, तर हामीले सङ्‍गति गर्दै गरेको विषयचाहिँ मानिसहरूसँग नभएका र तिनीहरूले कहिले नसुनेका नयाँ केही कुरा हो। तिमीहरूमध्ये केहीलाई यो कुरा अबोधगम्य लाग्‍न सक्छ—आदम र हव्वाको कुरा ल्याउनु र पछाडि फर्केर नोआको कुरा गर्नु त्यही कदमहरूलाई पुनः पछ्याउनु होइन र? तिमीहरूले जे सोचेता पनि, यस विषयमा सङ्‍गति गर्नको निम्ति यी अध्यायहरू धेरै नै लाभदायक छन् र आजको सङ्‍गतिको निम्ति तिनले शिक्षण मूलपाठ वा प्रत्यक्ष सामाग्रीहरूको काम गर्न सक्छन्। मैले यो सङ्‍गति सकुञ्‍जेलसम्ममा यी अध्यायहरू छान्‍नु पछाडिको मेरो अभिप्रायहरू तिमीहरूले बुझ्‍ने छौ। पहिले बाइबल पढेकाहरूले यी केही पदहरू पढेका हुन सक्छन्, तर तिनीहरूलाई नबुझेका हुन सक्छन्। पहिले, छोटकरीमा तिनीहरूको समीक्षा गरौँ, त्यसपछि हाम्रो सङ्‍गतिको दौरानमा हरेकलाई विस्तृतमा हेरौँ।
आदम र हव्वा मानवजातिका पुर्खा हुन्। हामीले बाइबलका पात्रहरूलाई उल्लेख गर्नुपर्‍यो भने, ती दुईबाट सुरु गर्नुपर्छ। अर्कोचाहिँ नोआ हो, मानवजातिको दोस्रो पुर्खा। तेस्रो पात्र को हो? (अब्राहम।) के तिमीहरू सबैलाई अब्राहमको कथा थाहा छ? तिनीहरूमध्ये केहीलाई थाहा हुन सक्छ, तर अन्यलाई स्पष्ट थाहा नहुन सक्छ। चौथो पात्र को हो? सदोमको विनाशको कथामा कसको बारेमा उल्लेख छ? (लोत।) तर लोतलाई यहाँ उद्धृत गरिएको छैन। यसले कसलाई जनाउँछ? (अब्राहमलाई।) अब्राहमको कथामा उल्लेख गरिएको मूख्य कुराचाहिँ यहोवा परमेश्‍वरले भन्‍नुभएको कुरा हो। के तिमीहरू यसलाई देख्छौ? पाचौँ पात्र को हो? (अय्यूब।) परमेश्‍वरले उहाँको अहिलेको कामको चरणमा अय्यूबको कथालाई धेरै उल्लेख गर्नुभएको छैन र? त्यसो भए के तिमीहरू यस कथालाई धेरै वास्ता गर्छौ? यदि तिमीहरू धेरै वास्ता गर्छौ भने, के तिमीहरूले बाइबलमा अय्यूबको कथालाई ध्यान दिएर पढेका छौ? अय्यूबले भनेका र गरेका कुराहरू के तिमीहरूलाई थाहा छ? तिमीहरू जसले यसलाई सबैभन्दा धेरै पढेका छौ, तिमीहरूले कति पटक पढेका छौ? के यसलाई अक्सर पढ्छौ? नेपालका दिदीबहिनीहरू हामीलाई भन्‍। (हामी अनुग्रहको समयमा हुँदा मैले केही पटक पढेको थिएँ।) त्यसपछि तिमीहरूले फेरि पढेका छैनौ? त्यो रोदनकारी छ। म तिमीहरूलाई भन्छुः परमेश्‍वरको कामको यस चरणमा उहाँले अय्यूबलाई धेरै पटक उल्लेख गर्नुभएको छ, जुनचाहिँ उहाँका अभिप्रायहरूको प्रतिबिम्ब हो। उहाँले अय्यूबलाई धेरै पटक उल्लेख गर्नुभयो तर यसले तिमीहरूको ध्यान खिचेन भन्‍ने कुरा यस कुराको प्रमाण हो किः तिमीहरूमा असल मानिसहरू र परमेश्‍वरको भय मान्‍ने तथा दुष्टबाट अलग रहने मानिसहरू बन्‍ने इच्छा छैन। किनकि परमेश्‍वरले उद्धृत गर्नुभएको अय्यूबको कथाको अपूर्ण धारणामा नै तिमीहरू सन्तुष्ट छौ। तिमीहरू केवल कथा बुझ्‍ने कुरामा नै सन्तुष्ट छौ, तर अय्यूब को हो र परमेश्‍वरले अय्यूबको बारेमा धेरै घटनाहरूमा उल्लेख गर्नुभएको कुरा पछाडिको उद्देश्यलाई वास्ता राख्दैनौ र विस्तृतमा बुझ्‍न खोज्दैनौ। यदि परमेश्‍वरले प्रशंसा गरेको त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा तिमीहरूलाई चासो छैन भने, तिमीहरूले केमा ध्यान दिइरहेका छौ? परमेश्‍वरले उल्लेख गर्नुभएको यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको बारेमा तिमीहरूले वास्ता राख्दैनौ वा त्यसको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्दैनौ भने, परमेश्‍वरको वचनप्रतिको तिमीहरूको मनोवृत्तिको बारेमा त्यसले के भन्छ? के त्यो खेदजनक कुरा होइन? तिमीहरूमध्ये धेरै जना व्यवहारिक कुराहरूमा संलग्‍न हुँदैनौ वा सत्यताको खोजी गर्दैनौ भन्‍ने कुरालाई यसले प्रमाणित गर्दैन र? यदि तैँले सत्यताको खोजी गरिस् भने परमेश्‍वरले स्वीकार गर्नुभएका मानिसहरूमा र परमेश्‍वरले भन्‍नुभएका पात्रहरूका कथाहरूमा तैँले आवश्यक ध्यान दिने छस्। तँ तिनीहरूको मापदण्डमा सायदै पुग्लास् वा तिनीहरूका कथाहरू स्पर्शनीय पाऊलास्, छिटो गएर तिनीहरूको बारेमा पढ्ने छस्, तिनीहरूलाई बुझ्‍ने प्रयास गर्ने छस्, तिनीहरूको उदाहरण पछ्याउने तरिकाहरू खोज्‍ने छस् र तेरो क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने छस्। सत्यताको चाहना राख्‍नेले यसरी नै काम गर्नुपर्छ। तर तथ्य यही हो कि यहाँ बसेका तिमीहरूमध्ये धेरैले अय्यूबको कथा कहिले पनि पढेका छैनौ—र यसले धेरै कुरा बताउँछ।
मैँले भर्खरै छलफल गर्दै गरेको विषयमा फर्कौँ। पुरानो करारको व्यवस्थाको युगसँग सम्बन्धित धर्मशास्त्रको यस खण्डमा, बाइबल पढ्ने धेरैजसो मानिसहरूलाई थाहा भएका उच्च प्रतिनिधिमूलक पात्रहरू बारेका निश्‍चित कथाहरूमा ध्यान दिने निर्णय मैँले गरेको छु। यी पात्रहरू बारेका कथाहरू पढ्ने जो कोहीले तिनीहरूमाथि परमेश्‍वरले गर्नुभएको काम र तिनीहरूसँग परमेश्‍वरले बोल्‍नुभएका वचनहरू आजका मानिसहरूका निम्ति पनि मूर्त र सुलभ छन् भन्‍ने कुराको महसुस गर्न सक्नेछन्। जब तैँले बाइबलमा सङ्ग्रहित यी कथाहरू पढ्छस्, इतिहासका ती समयहरूमा परमेश्‍वरले आफ्नो काम कसरी गर्नुभयो र मानिसहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुभयो भन्‍ने कुरा तैँले अझ राम्ररी बुझ्छस्। तर तैँले ती कथाहरू स्वयम् वा तिनमा भएका पात्रहरूमा ध्यान दे भनेर मैँले यी अध्यायहरूको बारेमा आज छलफल गरेको होइन। बरु, यी पात्रहरूका कथाहरूद्वारा तैँले परमेश्‍वरको कामहरू र उहाँको स्वभावलाई सराहना गर्न सक् भनेर मैले यसो गरेको हुँ। यसले तँलाई परमेश्‍वरलाई सजिलै जान्‍न र बुझ्‍न, उहाँको वास्तविक पक्ष हेर्न सक्षम तुल्याउनेछ; यसले उहाँ बारेको तेरा अनुमान र धारणाहरूलाई हटाउनेछ र अस्पष्टताले ढाकेको विश्‍वासको बाटो मोड्न तँलाई मदत गर्ने छ। तँसँग बलियो जग नभएसम्म, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम्‌लाई बुझ्‍ने कोसिसले निःसहाय, शक्तिहीन र कहाँबाट सुरु गर्ने कुरा थाहा नभएको अनिश्‍चिततातर्फ डोर्याउन सक्छ। यसले मलाई एउटा विधि र तरिकाको विकास गर्न प्रेरित गर्‍यो जसले परमेश्‍वरलाई अझ राम्ररी बुझ्‍न, परमेश्‍वरको इच्छालाई साँचो तरिकाले सराहना गर्न, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम्‌लाई बुझ्‍नको निम्ति तेरो मदत गर्छ, र तँलाई परमेश्‍वरको अस्तित्व वास्तविक रूपमा अनुभव गर्न र मानवजातिप्रति उहाँको इच्छालाई सराहना गर्न दिन्छ। के यी सबै तिमीहरूकै फाइदाका लागि हुने छैनन् र? तिमीहरूले अहिले यी कथा र धर्मशास्त्रका खण्डहरू पुनः पढ्दा तिमीहरूका हृदयहरूमा के महसुस गर्छौ? के मैले छानेका धर्मशास्त्रका खण्डहरू अनावश्यक हुन् जस्तो तिमीहरूलाई लाग्छ? मैले भर्खरै तिमीहरूलाई भनेका कुराहरूलाई मैले पुनः जोड दिनुपर्छः परमेश्‍वरले मानिसहरूमा आफ्नो काम कसरी गर्नुहुन्छ भन्‍ने कुरा देख्‍न र मानवजातिप्रति उहाँको मनोवृत्ति अझ राम्ररी बुझ्‍नको निम्ति तिमीहरूलाई मदत गर्नु नै तिमीहरूलाई यी पात्रहरूका कथाहरू पढ्‍न लगाउनुको उद्देश्य हो। तिमीहरूलाई यो समझ प्राप्त गर्नका निम्ति केले मदत गर्ने छ? विगतमा परमेश्‍वरले गर्नुभएको काम बुझ्‍ने र त्यसलाई परमेश्‍वरले अहिले गरिरहनुभएको कामसँग जोड्‍ने कार्यले उहाँका असङ्ख्य पक्षहरूको सराहना गर्न तिमीहरूलाई मदत गर्छ। यी असङ्ख्य पक्षहरू वास्तविक छन् र परमेश्‍वरलाई जान्‍न चाहने सबैले यी कुराहरू जान्‍नु र यिनीहरूको सराहना गर्नु पर्छ।
धर्मशास्त्रलाई उद्धृत गर्दै आदम र हव्वाको कथा सुरु गरौँ।
१. आदम र हव्वा
१) आदमलाई परमेश्‍वरको आज्ञा
यी केही सरल वचनहरूमा, हामीले परमेश्‍वरको हृदय देख्छौँ। तर कस्तो किसिमको हृदयले आफैँलाई देखाउँछ? के परमेश्‍वरको हृदयमा प्रेम छ? के त्यँहा चासो छ? यी पदहरूमा, परमेश्‍वरको प्रेम र चासोलाई सराहना गर्न मात्र होइन तर घनिष्ठ रूपले महसुस पनि गर्न सकिन्छ। के तिमीहरू सहमत हुँदैनौ। मैले यसो भनेको सुनेर पनि, के तिमीहरू यिनीहरू सामान्य वचनहरू मात्र हुन् भन्‍ने सोच्छौ? जे भए पनि ती त्यति सामान्य पनि छैनन्, होइन र? के तिमीहरूलाई पहिले यसको बारेमा अवगत थियो? परमेश्‍वरले व्यक्तिगत रूपमा तँलाई यी वचनहरू भन्‍नुभयो भने, तैँले भित्री रूपमा कस्तो महसुस गर्ने थिइस्? यदि तँ मानव नभएको भए, यदि तेरो हृदय कठोर भएको भए, तैँले केही महसुस गर्न सक्‍ने थिइनस्, तैँले परमेश्‍वरको प्रेमलाई सराहना गर्न सक्‍ने थिइनस् र तैँले परमेश्‍वरको हृदय बुझ्‍ने कोसिस गर्ने थिइनस्। तर मानवीय चेत र विवेक भएको व्यक्ति भएको कारण तैँले फरक महसुस गर्ने थिइस्। तैँले न्यानोपन महसुस गर्ने थिइस्, तैँले वास्ता गरिएको र प्रेम गरिएको महसुस गर्ने थिइस् र तैँले सुख महसुस गर्ने थिइस्। के यो सही होइन? जब तैँले यी कुराहरूको अनुभव गर्छस्, तैँले परमेश्‍वरप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने छस्? के तैँले परमेश्‍वरमा जोडिएको महसुस गर्ने छस्? के तैँले हृदयको गहिराइबाट परमेश्‍वरलाई प्रेम र सम्मान गर्ने छस्? के तेरो हृदय परमेश्‍वरको नजिक जाने छ? यसबाट तैँले मानिसको निम्ति परमेश्‍वरको प्रेम कति महत्त्वपूर्ण छ भ‍न्‍ने देख्‍न सक्छस्। तर मानिसले परमेश्‍वरको प्रेमको सराहना गर्नु र त्यसलाई बुझ्‍नु अझ जरुरी छ? वास्तवमा, परमेश्‍वरले आफ्नो कामको चरणमा उस्तै धेरै कुराहरू भन्‍नुहुन्‍न र? के आज परमेश्‍वरको हृदयको सराहना गर्ने मानिसहरू छन्? के तिमीहरूले मैले भर्खरै भनेका परमेश्‍वरका इच्छा बुझ्‍न सक्छौ? वास्तवमा यो यति ठोस, मूर्त र वास्तविक हुँदा पनि तिमीहरूले परमेश्‍वरको इच्छाको सराहना गर्न सक्दैनौ। त्यसैले तिमीहरूमा परमेश्‍वरको वास्तविक ज्ञान र समझ छैन भनेर म भन्छु। के यो साँचो होइन? तर अहिलेलाई यति मै छाडौँ।
२) परमेश्‍वरले हव्वालाई सृष्टि गर्नुहुन्छ
३) परमेश्‍वरले आदम र हव्वाको निम्ति छालाका लुगा बनाउनुहुन्छ
यस तेस्रो खण्डलाई हेरौं, जसले के उल्‍लेख गर्छ भने, आदमले हव्वालाई नाम दिनुको पछाडि वास्तवमा अर्थ छ। सृष्टि गरिएपछि, आदमसँग उसका आफ्नै विचारहरू थिए र उसले धेरै कुरा बुझ्थ्यो भन्‍ने यसले देखाउँछ। तर अहिलेको निम्ति, उसले के बुझ्यो र उसले कति बुझ्यो भन्‍ने कुराको हामी अध्ययन वा खोजी गर्न गइरहेका छैनौं, किनकि तेस्रो खण्ड छलफल गर्नुको मेरो उद्देश्य त्यो होइन। त्यसो भए, मैले जोड दिन खोजेको मूल बुँदा के हो त? यस पङ्‌क्तिलाई हेरौं, “यहोवा परमेश्‍वरले आदम र तिनकी पत्‍नीका निम्ति छालाका वस्‍त्रहरू बनाइदिनुभयो र तिनीहरूलाई लगाइदिनुभयो।” आजको हाम्रो सङ्‍गतिमा हामीले धर्मशास्त्रको यस पङ्‌क्तिको बारेमा छलफल गरेनौं भने, यी वचनहरूका गहिरा आशयहरूलाई तिमीहरूले कहिल्यै पनि स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दैनौ। सुरुमा, म केही सङ्केतहरू दिन्छु। तिमीहरू इच्छा गर्छौ भने, आदम र हव्वा बसोबास गरिरहेका अदनको बगैँचाको कल्पना गर। परमेश्‍वर तिनीहरूलाई भेट गर्न जानुहुन्छ, तर तिनीहरू नाङ्गै भएका कारण तिनीहरू लुक्छन्। परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई देख्‍न सक्‍नुहुन्‍न र उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनुभएपछि, तिनीहरू भन्छन्, “हाम्रा शरीरहरू नाङ्‍गै भएका कारण हामीले तपाईंलाई भेट्ने हिम्मत गरेनौँ।” तिनीहरू नाङ्गै भएका कारण तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई भेट्ने हिम्मत गर्दैनन्। त्यसो भए, यहोवा परमेश्‍वरले तिनीहरूको निम्ति के गर्नुहुन्छ? मूल पाठले भन्छ: “यहोवा परमेश्‍वरले आदम र तिनकी पत्‍नीका निम्ति छालाका वस्‍त्रहरू बनाइदिनुभयो र तिनीहरूलाई लगाइदिनुभयो।” यसबाट, परमेश्‍वरले तिनीहरूको लुगा बनाउनको निम्ति के प्रयोग गर्नुभयो भनेर के तिमीहरू बुझ्छौ? परमेश्‍वरले तिनीहरूको लुगा बनाउनको निम्ति जनावरको छाला प्रयोग गर्नुभयो। यसको अर्थ, मानिसले वस्त्रको रूपमा लगाऊन् भनेर परमेश्‍वरले जनावरको रौँको लुगा बनाउनुभयो। परमेश्‍वरले मानिसको निम्ति बनाउनुभएको पहिलो पहिरन यिनै थिए। आजको मापदण्डअनुसार जनावरको रौँको लुगा विलासी वस्तु हो र सबैले यसलाई किनेर लगाउन सक्दैनन्। यदि कसैले तँलाई सोध्छ: हाम्रा पुर्खाहरूले लगाएको पहिलो पहिरन के थियो? तैँले जवाफ दिन सक्छस्: जनावरको रौँको कपडा। त्यो रौँको लुगा कसले बनायो? तैँले यस्तो जवाफ दिन सक्छस्: यसलाई परमेश्‍वरले बनाउनुभयो! यो नै यहाँको मुख्य बुँदा हो: यो लुगा परमेश्‍वरले बनाउनुभएको थियो। के यो छलफल गर्न योग्य कुरा होइन? मेरो वर्णन सुनेपछि, के तिमीहरूको मनमा एउटा तस्विर आयो? कम्तीमा पनि मोटामोटी ढाँचा तिमीहरूमा हुनुपर्ने हो। मानिसको पहिलो पहिरन के थियो भन्‍ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा होस् भनेर मैले यसो भनेको होइन। त्यसो भए कुरा के हो त? विषयचाहिँ जनावरको रौँको लुगा होइन, तर उहाँले यहाँ गर्नुभएका कुरामा परमेश्‍वरले प्रकट गर्नुभए अनुसार उहाँको स्वभाव, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यसलाई मानिसहरूले कसरी बुझ्छन् भन्‍ने कुराको हो।
के यी छलफलहरूले तिमीहरूलाई सहायता गर्‍यो? ती कति सहयोगी भएका छन्? (हामीसँग परमेश्‍वरको प्रेमको बारेमा अझै धेरै बुझाइ र ज्ञान छ।) (सङ्‍गतिको यस विधिले हामीलाई भविष्यमा परमेश्‍वरको वचनको सराहना गर्न, उहाँका भावनाहरू र उहाँले ती कुराहरू भन्नुहुँदा उहाँले भन्‍नुभएका कुराहरू पछाडिका अर्थ बुझ्‍न र उहाँले त्यस समय कस्तो महसुस गर्नुभयो भन्‍ने कुरा बुझ्‍न मदत गर्न सक्छ।) के तिमीहरूमध्ये कोही यी वचनहरू पढेपछि परमेश्‍वरको वास्तविक अस्तित्वको बारेमा अझ उत्कट तवरले सजग छौ? के परमेश्‍वरको अस्तित्व खोक्रो र अस्पष्ट छैन रहेछ भन्‍ने अनुभव गर्छौ? तिमीहरूले यसको अनुभव गरेपछि, के तिमीहरूले परमेश्‍वर तिमीहरूको छेवैमा हुनुहुन्छ भन्‍ने महसुस गर्न सक्छौ? सायद अहिले त्यो अनुभूति त्यति स्पष्ट छैन वा तिमीहरूले अझै त्यसको महसुस गर्न सकेका छैनौ होला। तर एक दिन, जब तिमीहरूका हृदयमा साँचो रूपमा गहिरो बुझाइ र परमेश्‍वरको स्वभाव र सारको वास्तविक ज्ञान हुन्छ, तब तैँले परमेश्‍वर तेरो छेवैमा हुनुहुन्छ भन्‍ने अनुभूति गर्न सक्‍नेछस्—तैँले आफ्नो हृदयमा परमेश्‍वरलाई कहिल्यै पनि साँचो रूपमा स्वीकार गरेको थिइनस्। र सत्य यही हो!
सङ्‍गतिको यस तरिकाको बारेमा तिमीहरूलाई के लाग्छ? के तिमीहरूले यसलाई बुझ्‍न सक्छौ? के तिमीहरूलाई परमेश्‍वरको काम र परमेश्‍वरको स्वभाव सम्बन्धी विषय ज्यादै भारी लाग्छ? तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ? (धेरै राम्रो, उत्साहित।) के कुराले तिमीहरूलाई राम्रो महसुस गरायो? तिमीहरू किन उत्साहित भयौ? (यो अदनको बगैँचामा अर्थात् परमेश्‍वरको छेउमा फर्केर गए जस्तै थियो।) “परमेश्‍वरको स्वभाव” मानिसहरूको निम्ति वास्तवमा अपरिचित विषय हो, किनकि तिमीहरूले प्रायजसो कल्पना गर्ने र पुस्तकहरूमा पढ्ने र सङ्गतिहरूमा सुन्‍ने कुराहरूले तिमीहरूलाई हात्ती छुने दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू जस्तै महसुस गराएको छ—तिमीहरूले आफ्ना हातहरूले छामिरहेका मात्र छौ, तर वास्तवमा तिमीहरूले कल्‍पनामा वास्तविक चित्र उतार्न सक्दैनौ। अन्धाधुन्ध यताउता छामछुम गरेर यसले तँलाई परमेश्‍वरको बारेमा अपूर्ण बुझाइ पनि दिँदैन, उहाँ सम्‍बन्धी स्पष्ट अवधारणाको त कुरै नगरौं; यसले परमेश्‍वरको स्वभाव र सारको उचित परिभाषा दिनबाट तँलाई रोकेर तेरो कल्पनालाई भड्काउने काम मात्र गर्छ र तेरो कल्पनाबाट उत्पन्‍न अनिश्‍चितताहरूले तेरो हृदयमा अपरिहार्य रूपमै शङ्काहरू भर्नेछ। जब तँ केही कुराको बारेमा निश्‍चित हुँदैनस् तर पनि बुझ्‍ने कोसिस गर्छस्, तब तेरो हृदयमा सधैँ विरोधाभासहरू तथा द्वन्द्व हुनेछन् र तँमा अशान्तिको भाव पनि हुनेछ, जसले तँलाई भ्रमित र अन्योलमा पार्नेछन्। परमेश्‍वरको खोजी गर्न, परमेश्‍वरलाई जान्‍न र उहाँलाई स्पष्ट देख्‍न खोज्‍ने चाहना गर्नु तर कहिले पनि जवाफ पत्ता लगाउन नसक्‍ने जस्तो देखिनु पीडादायी कुरा होइन र? अवश्य नै, यी वचनहरू भयसाथ परमेश्‍वरको आदर गर्न र उहाँलाई सन्तुष्ट तुल्याउन खोज्‍नेहरूको निम्ति लक्षित छन्। यस्ता कुराहरूमा ध्यान नदिने मानिसहरूको निम्ति यसले केही अर्थ राख्दैन, किनकि परमेश्‍वरको वास्तविकता र अस्तित्व केवल किंवदन्ती वा कल्पना हुन् भन्‍ने कुरा तिनीहरूले सबैभन्दा बढी आशा गरेको कुरा हो, ताकि तिनीहरूले आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न सकून्, ताकि तिनीहरू सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन सकून्, ताकि तिनीहरूले परिणामहरूको कुनै मतलब नै नराखी दुष्ट कामहरू गर्न सकून्, यसैले तिनीहरूले दण्डको सामना गर्न वा कुनै जिम्मेवारी बहन गर्न नपोस्, ताकि परमेश्‍वरले दुष्ट काम गर्नेहरूका निम्ति भन्‍नुभएका कुराहरू तिनीहरूमा लागू नहोस्। यी मानिसहरू परमेश्‍वरको स्वभाव बुझ्‍नको निम्ति इच्छुक छैनन्। परमेश्‍वर र उहाँको बारेमा सबै कुरा जान्‍ने कोसिस गर्दागर्दै तिनीहरू बिरामी परेका छन् र थाकेका छन्। परमेश्‍वर अस्तित्वमा नभएको भए हुनेथियो भन्‍ने तिनीहरू रुचाउँछन्। यी मानिसहरूले परमेश्‍वरको विरोध गर्छन्, र तिनीहरू बहिष्कृत हुनेहरूमध्येमा पर्छन्।
अर्को, हामी नोआको कथा र यो कसरी परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम्सँग सम्बन्धित छ भन्‍ने कुराको छलफल गर्नेछौँ।
धर्मशास्त्रको यस खण्डमा परमेश्‍वरले नोआलाई के गरिरहनुभएको तिमीहरू देख्छौ? सायद यहाँ बसेका सबैले धर्मशास्त्रको पढाइबाट यसको बारेमा केही जान्दछ: परमेश्‍वरले नोआलाई जहाज बनाउने तुल्याउनुभयो, त्यसपछि परमेश्‍वरले जलप्रलयद्वारा संसारको विनाश गर्नुभयो। परमेश्‍वरले नोआलाई तिनको आठ जनाको परिवारलाई बचाउन जहाज बनाउन लगाउनुभयो, जसले तिनीहरूलाई बच्‍ने र मानवजातिको अर्को पुस्ताको पुर्खा बन्‍ने अनुमति दियो। अब धर्मशास्त्रतिर फर्कौँ।
१) परमेश्‍वरले संसारलाई जलप्रलयद्वारा नष्ट गर्ने अभिप्राय राख्‍नुहुन्छ र नोआलाई जहाज बनाउने निर्देशन दिनुहुन्छ
नोआलाई बोलाइएको कुरा एउटा सामान्य तथ्य हो, तर हामीले यस अभिलेखमा कुरा गरिरहेको मुख्य बुँदा—परमेश्‍वरको स्वभाव, उहाँको इच्छा र उहाँको सार—चाहिँ सामान्य कुरा होइन। परमेश्‍वरका यी विभिन्‍न पक्षहरूलाई बुझ्‍नको निम्ति, हामीले पहिले परमेश्‍वरले कस्तो किसिमको व्यक्तिलाई बोलाउने इच्छा गर्नुहुन्छ भन्‍ने कुरा बुझ्‍नुपर्छ, र यसको माध्यमद्वारा उहाँको स्वभाव, इच्छा, र सार बुझ्‍नुपर्छ। यो महत्वपूर्ण छ। यसैले परमेश्‍वरको नजरमा, उहाँले बोलाउने मानिस कस्तो किसिमको व्यक्ति हुन्छ? उक्त व्यक्ति उहाँका वचनहरू सुन्‍न सक्ने र उहाँका निर्देशनहरू मान्‍न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। साथै, उक्त व्यक्ति जिम्मेवारी बोध गर्ने, परमेश्‍वरको वचनलाई पूरा गर्नैपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्यको रूपमा व्यवहार गरेर यसलाई पुरा गर्ने हुनुपर्छ। के त्यसो भए उक्त व्यक्तिले परमेश्‍वरलाई चिनेको हुनुपर्छ? होइन। त्यस बेला, नोआले परमेश्‍वरका शिक्षाहरूको बारेमा त्यति सुनेको थिएन वा परमेश्‍वरको कुनै पनि कामको अनुभव गरेको थिएन। यसैले, नोआसँग परमेश्‍वरको बारेमा थोरै ज्ञान थियो। नोआ परमेश्‍वरसँग हिँड्थे भनेर अभिलेख राखेको भएता पनि, के उसले कहिले परमेश्‍वरको व्यक्तित्वलाई देख्यो? यसको जवाफ हुन्छ, निश्‍चय नै देखेन! किनकि ती दिनहरूमा, परमेश्‍वरका दूतहरू मात्र मानिसहरूका माझमा आउँथे। तिनीहरूका बोली र काममा तिनीहरूले परमेश्‍वरको प्रतिनिधित्व गरेता पनि, तिनीहरूले केवल परमेश्‍वरको इच्छा र उहाँका अभिप्रायहरू व्यक्त गर्थे। परमेश्‍वरको व्यक्तित्व मानिसकहाँ आमने सामने प्रकट गरिएको थिएन। धर्मशास्त्रको यस खण्डमा, नोआले के गर्नुपर्ने थियो र उसलाई परमेश्‍वरका निर्देशनहरू के थिए भन्‍ने मात्र देख्छौँ। यसैले परमेश्‍वरले यहाँ अभिव्यक्त गर्नुभएको सार के थियो? परमेश्‍वरले गर्ने हरेक काम सूक्ष्मताका साथ योजना गरिन्छन्। जब उहाँले भइरहेको कुनै कुरा वा परिस्थितिलाई हेर्नुहुन्छ, त्यसको मापन गर्ने मापदण्ड उहाँको नजरमा हुन्छ र त्यसको सामना गर्नको निम्ति उहाँले कुनै योजना शुरू गर्नुपर्छ कि पर्दैन अथवा त्यस कुरा वा परिस्थितिको सामना गर्नको निम्ति कुन तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ भ‍न्‍ने कुराको निर्धारण त्यही मापदण्डले गर्छ। सबै कुराप्रति उहाँ उदासीन वा भावनाविहिन हुनुहुन्‍न। वास्तवमा यसको ठिक विपरित छ। परमेश्‍वरले नोआलाई के भन्‍नुभयो भन्‍ने कुरालाई व्यक्त गर्ने एउटा पद यहाँ छ: “मेरा सामुन्‍ने सारा देहको अन्त आएको छ; किनकि तिनीहरूद्वारा पृथ्वी हिंसाले भरिएको छ; अनि, हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वीसहित नष्ट गर्नेछु।” परमेश्‍वरले यसो भन्‍नुहुँदा के उहाँले मानवलाई मात्र नष्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्‍ने अर्थ यसले दिन्छ? होइन! उहाँले शरीर भएका सबै जीवित प्राणीहरूलाई नष्ट गर्न गइरहनुभएको थियो भनी परमेश्‍वरले भन्नुभयो। परमेश्‍वरले किन विनाशको चाहना गर्नुभयो? यहाँ परमेश्‍वरको स्वभावको अर्को प्रकाश छ: परमेश्‍वरको नजरमा, मानिसको भ्रष्टता, सारा प्राणीहरूको फोहोरीपन, हिंसा र अनाज्ञाकारीताप्रति उहाँको धैर्यको सीमा छ। उहाँको सिमा के हो? यो परमेश्‍वरले भन्‍नुभए जस्तै होः “परमेश्‍वरले पृथ्वीलाई हेर्नुभयो र त्यो भ्रष्ट थियो किनकि पृथ्वीमा भएका सारा देहले आफ्नो मार्ग भ्रष्ट पारेका थिए।” “किनकि पृथ्वीमा भएका सारा देहले आफ्नो मार्ग भ्रष्ट पारेका थिए” वाक्यांशको अर्थ के हो? यसको अर्थ यही हो, परमेश्‍वरलाई पछयाउनेहरू, परमेश्‍वरको नाम पुकार्नेहरू, परमेश्‍वरलाई होमबली चढाउनेहरू, परमेश्‍वरलाई मुखले स्वीकार गर्ने र परमेश्‍वरको स्तुति गर्नेहरू लगायत कुनै पनि जीवित प्राणीहरू—तिनीहरूको व्यवहार भ्रष्टताले पूर्ण भएर त्यो परमेश्‍वरको नजरमा पुगेपछि, उहाँले तिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही नै परमेश्‍वरको सीमा थियो। त्यसो भए परमेश्‍वर मानिस र सारा प्राणीहरूको भ्रष्टतासँग कुन हदसम्म धैर्य रहनुभयो? चाहे परमेश्‍वरका अनुयायीहरू वा विश्‍वास नगर्ने सारा मानिसहरू सही बाटोमा नहिँडुञ्‍जेलसम्म। मानिस नैतिक रूपमा भ्रष्ट भएर दुष्टताले पूर्ण नभएको मात्र होइन, तर परमेश्‍वरको अस्तित्वलाई विश्‍वास गर्ने कोही पनि नहुञ्‍जेलसम्म, संसारलाई परमेश्‍वरले शासन गर्नुहुन्छ र परमेश्‍वरले मानिसहरूकहाँ ज्योति ल्याउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्‍नुहुन्छ भनेर विश्‍वास गर्ने व्यक्तिको त कुरै नगरौँ। मानिसले परमेश्‍वरको अस्तित्वलाई घृणा गर्ने र परमेश्‍वरलाई अस्तित्वमा आउन अनुमति नदिने हदसम्म। जब मानिसको भ्रष्टता यस बिन्दुमा पुग्छ, तब परमेश्‍वरले सहन सक्‍नुहुन्‍न। केले यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने छ? परमेश्‍वरको क्रोध र परमेश्‍वरको दण्डको आगमनले। के त्यो परमेश्‍वरको स्वभावको आंशिक प्रकाश थिएन? यस वर्तमान युगमा, के कोही पनि मानिसहरू परमेश्‍वरको नजरमा धर्मी छैनन्? के परमेश्‍वरको नजरमा सिद्ध मानिसहरू कोही पनि छैनन्? के यो युग पृथ्वीका सारा प्राणीहरूको व्यवहार परमेश्‍वरको नजरमा भ्रष्ट भएको युग होइन? यस दिन र युगमा—परमेश्‍वरले पूर्ण बनाउन चाहनुभएका र परमेश्‍वरलाई पछयाउन र उहाँको मुक्तिलाई स्वीकार गर्न सक्ने बाहेकका—सबै देहका मानिसहरूले परमेश्‍वरको धैर्यको सीमालाई चुनौति दिइरहेका छैनन्? के तिमीहरूको नजिकै भइरहेका सबै कुराहरू—तिमीहरूका आफ्नै आँखाले देख्‍ने र तिमीहरूका कानले सुन्‍ने र यस संसारमा व्यक्तिगत रूपले हरेक दिन अनुभव गर्ने कुराहरू—हिंसाले पूर्ण छैनन्? परमेश्‍वरको नजरमा, यस्तो संसार, यस्तो युग, अन्त हुनुपर्दैन र? वर्तनमान युगको पृष्ठभूमि नोआको समयको पृष्ठभूमिभन्दा फरक भएता पनि, मानिसको भ्रष्टताप्रति परमेश्‍वरको भावनाहरू र क्रोध उस्तै छ। आफ्नो कामको कारण परमेश्‍वर धैर्य रहन सक्षम हुनुभएको छ, तर परिस्थिति र स्थितिहरूलाई मध्यनजर गर्दा, परमेश्‍वरको नजरमा, यो संसार धेरै पहिले नै नष्ट गरिसक्नुपर्ने थियो। संसारलाई जलप्रलयद्वारा नष्ट गर्दाको समयमा भएको भन्दा धेरै परका परिस्थितिहरू छन्। तर भिन्‍नता के छ? यो पनि परमेश्‍वरको हृदयलाई सबैभन्दा बढी दुःखी बनाउने कुरा, र सायद तिमीहरूमध्ये कसैले पनि सराहना गर्न नसक्ने कुरा हो।
अर्को खण्ड हेरौँ।
२) जलप्रलयपछि नोआलाई परमेश्‍वरको आशिष्
परमेश्‍वरले नोआलाई दिनुभएको आशिष्‌को बारेमा, केही मानिसहरूले भ‍न्‍नेछन्ः “यदि मानिसले परमेश्‍वरलाई सुन्यो र परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्‍यो भने, परमेश्‍वरले मानिसलाई आशिष्‌ दिनुहुन्छ। यो भन्‍नुपर्ने कुरा नै होइन?” के हामी त्यसो भन्‍न सक्छौँ? कतिपय मानिसहरू भन्छन्: “सक्‍दैनौं।” किन हामीले त्यसो भन्‍न सक्दैनौं? केही मानिसहरू भन्छन्ः “मानिस परमेश्‍वरको आशिष्‌मा आनन्द लिने योग्यको छैन।” त्यो पूर्ण रूपमा सही छैन। किनभने कुनै एक व्यक्तिले परमेश्‍वरले सुम्पिनुभएको कुरालाई स्वीकार गर्दा त्यसका कामहरू असल वा खराब के छन् र त्यस व्यक्तिले आज्ञा पालना गर्‍यो कि गरेन र त्यस व्यक्तिले परमेश्‍वरको इच्छालाई सन्तुष्ट गर्‍यो कि गरेन र तिनीहरूले गरेको कामले मापदण्ड पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्‍ने कुराको निर्णय गर्नको निम्ति परमेश्‍वरसँग मापदण्ड छ। परमेश्‍वरले मानिसको हृदयको वास्ता राख्‍नुहुन्छ, तिनीहरूको सतही कामहरूलाई होइन। कसैले जुनसुकै तवरले काम गरे पनि, जबसम्‍म तिनीहरूले केही न केही गर्छन्, परमेश्‍वरले त्यसलाई आशिष् दिनुपर्छ भन्‍ने छैन। परमेश्‍वरको बारेमा मानिसहरूमा यही गतल बुझाइ छ। परमेश्‍वरले कुनै कुराहरूको अन्तिम परिणाम मात्र हेर्नुहुन्‍न तर उहाँले मानिसको हृदय कस्तो छ र यी कुराहरूको विकासक्रममा मानिसको मनोवृत्ति कस्तो छ भन्‍ने कुरामा पनि उहाँले जोड दिनुहुन्छ र उहाँले तिनीहरूको आज्ञाकारिता, ध्यान र तिनीहरूको हृदयमा परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्ने चाहना छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ। नोआले त्यस समयमा परमेश्‍वरको बारेमा कति जानेका थिए? के त्यो तिमीहरूले अहिले जानेका धर्मसिद्धान्तहरू जति नै थियो? परमेश्‍वर बारेका धारणा र ज्ञान जस्ता सत्यताका पक्षहरूको आधारमा हेर्दा, के उसले तिमीहरूले जतिकै मलजल र हेरचाह प्राप्त गर्‍यो? होइन, गरेन! तर नकार्ने नसकिने एउटा तथ्य छ: आजका मानिसहरूको चेतना, मन र हृदयहरूको गहिराइमा, परमेश्‍वरप्रति तिनीहरूका धारणा र मनोवृत्तिहरू अस्पष्ट र अनेकार्थी छन्। मानिसहरूका एक भागसँग परमेश्‍वरको अस्तित्व प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति छ पनि भन्‍न सकिन्छ। तर नोआको हृदय र चेतनामा, परमेश्‍वरको उपस्थिति पूर्ण र शंकारहित थियो र त्यसैले परमेश्‍वरप्रति उसको आज्ञाकारिता विशुद्ध र जाँचको सामना गर्न सक्‍ने किसिमको थियो। परमेश्‍वरप्रति उसको हृदय शुद्ध र खुला थियो। परमेश्‍वरको हरेक वचनलाई पछ्याउनको निम्ति उसलाई मनाउन धर्मसिद्धान्तहरूको धेरै ज्ञानको आवश्यकता परेन, न त उसलाई परमेश्‍वरले सुम्पनुभएको कुरालाई स्वीकार गर्न र परमेश्‍वरले उसलाई गर्न लगाउनुभएका कुराहरू गर्न सक्षम हुनको निम्ति परमेश्‍वरको अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्ने धेरै तथ्यहरूको नै आवश्यकता नै उसलाई पर्‍यो। नोआ र आजका मानिसहरू बिचको अत्यावश्य फरक यही नै हो। परमेश्‍वरको नजरमा सिद्ध मानिसको वास्तविक परिभाषा पनि यही हो। परमेश्‍वरले नोआ जस्ता मानिसहरूको चाहना गर्नुहुन्छ। ऊ जस्तै मानिसलाई परमेश्‍वरले प्रशंसा गर्नुहुन्छ र ऊ पनि परमेश्‍वरले आशिष् दिने ठिकै प्रकारको व्यक्ति हो। के यसबाट तिमीहरूले केही अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्‍यौ? मानिसहरूले मानिसहरूलाई बाहिरबाट हेर्छन्, जबकि परमेश्‍वरले मानिसहरूको हृदय र तिनीहरूको सारहरू हेर्नुहुन्छ। परमेश्‍वरले कसैलाई पनि उहाँप्रति उत्साहहीन वा शंका हुने अनुमति दिनुहुन्‍न, न त उहाँले मानिसहरूलाई उहाँप्रति शंका गर्ने वा कुनै पनि प्रकारले उहाँको जाँच गर्ने अनुमति नै दिनुहुन्छ। यसर्थ, आजका मानिसहरू परमेश्‍वरको वचनसँग आमनेसामने भएता पनि—परमेश्‍वरसँग आमनेसामने भएता पनि—तिनीहरूको हृदयका गहिराइमा भएको केहीकुरा, तिनीहरूको भ्रष्टतापूर्ण तत्वको अस्तित्व र उहाँप्रति तिनीहरूको शत्रुतापूर्ण मनोवृत्तिको कारणले, परमेश्‍वरप्रति साँचो विश्‍वास गर्नबाट तिनीहरूलाई अवरोध गरेको छ र उहाँप्रति आज्ञाकारी हुनबाट रोकेको छ। यसैले परमेश्‍वरले नोआलाई दिनुभएको जस्तै आशिष् प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई धेरै कठिन छ।
३) परमेश्‍वरले इन्द्रेणीलाई मानिससँगको आफ्नो करारको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ
यसबाट हामीले परमेश्‍वरको स्वभावको कुन भागको बारेमा सिक्‍नुपर्छ? मानिस उहाँको विरोधी भएको हुनाले परमेश्‍वरले मानिसलाई घृणा गर्नभएको थियो, तर उहाँको हृदयमा मानवजातिप्रतिको उहाँको वास्ता, चासो र दया अपरिवर्तित नै रहे। उहाँले मानवजातिको विनाश गर्दा पनि उहाँको हृदय अपरिवर्तित नै रह्‍यो। जब मानवजाति परमेश्‍वरप्रति गम्भीर हदसम्म भ्रष्टता र अनाज्ञाकारिताले भरिपूर्ण भयो, तब परमेश्‍वरले उहाँको स्वभाव र सारको कारण र उहाँका सिद्धान्तहरूबमोजिम यस मानवजातिलाई नष्ट गर्नुपर्ने भयो। तर परमेश्‍वरको सारको कारण उहाँले अझै पनि मानवजातिमाथि दया गर्नुभयो र तिनीहरू बाँचिरहून् भनेर मानवजातिलाई उद्धार गर्न विभिन्‍न तरिकाहरू प्रयोग गर्न चाहनुभयो। तर मानिसले परमेश्‍वरको विरोध गर्‍यो, परमेश्‍वरको अवज्ञा गर्न जारी राख्यो र परमेश्‍वरको मुक्तिलाई स्वीकार गर्न इन्कार गर्‍यो; भन्नुको अर्थ उसले उहाँका असल अभिप्रायहरू स्वीकार गर्न इन्कार गर्‍यो। परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई जसरी बोलाउनुभएको भए तापनि, तिनीहरूलाई जसरी सम्झाउनुभएको भए तापनि, तिनीहरूको निम्ति जसरी आपूर्ति गरिदिनुभएको भए तापनि, तिनीहरूलाई जसरी सहायता गर्नुभएको भए तापनि वा तिनीहरूलाई जसरी सहन गर्नुभएको भए तापनि, मानिसले त्यसलाई बुझेन वा सराहना गरेन, न त तिनीहरूले कुनै ध्यान नै दिए। परमेश्‍वरले आफ्नो पीडामा, मानिसले आफ्नो दिशा बदल्छ कि भनेर पर्खँदै तिनीहरूलाई अझै पनि हदैसम्मको सहनशीलता प्रदान गर्न भुल्नुभएन। उहाँको हद पार भएपछि बिनासङ्‍कोच उहाँले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्नुभयो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, परमेश्‍वरले मानवजातिको विनाश गर्ने योजना बनाउनुभएको समयदेखि मानवजातिको विनाश गर्ने कार्य सुरु गर्नुभएको समयसम्म निश्‍चित समयावधि र प्रक्रिया थियो। यो प्रक्रिया मानिसलाई मार्ग परिवर्तन गर्न सक्षम तुल्याउनको निम्ति अस्तित्वमा थियो र यही नै परमेश्‍वरले मानिसलाई दिनुभएको अन्तिम मौका थियो। मानवजातिको विनाश गर्नुअघिको यस अवधिमा परमेश्‍वरले के गर्नुभयो? परमेश्‍वरले भारी मात्रामा सम्झाउने र प्रोत्सान गर्ने काम गर्नुभयो। परमेश्‍वरको हृदय जतिसुकै पीडा र शोकमा भएको भए तापनि उहाँले मानवजातिमा आफ्नो वास्ता, चासो र प्रचुर कृपा निरन्तर प्रदान गर्नुभयो। यसबाट हामी के देख्छौँ? नि:सन्देह, हामी देख्छौँ कि मानवजातिप्रति परमेश्‍वरको प्रेम वास्तविक छ, केवल ओठेभक्ति जस्तो मात्र छैन। यो वास्तविक, मूर्त र सराहनीय छ, नक्कली, मिलावट भएको, छली वा कपटी छैन। परमेश्‍वरले कहिले पनि छलको प्रयोग गर्नुहुन्‍न वा उहाँ प्रेमयोग्य हुनुहुन्‍छ भन्‍ने देखाउन नक्कली छवि प्रयोग गर्नुहुन्‍न। उहाँले आफ्नो प्रेमिलोपन मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति वा आफ्नो प्रेमिलोपन र पवित्रताको देखावटी प्रदर्शन गर्न कहिले पनि झुटो साक्षीको प्रयोग गर्नुहुन्‍न। के परमेश्‍वरको स्वभावका यी पक्षहरू मानिसको प्रेमको योग्य छैनन्? के तिनीहरू आराधनाका योग्य छैनन्? के तिनीहरू स्‍नेहपूर्वक याद गरिन योग्य छैनन्? यस बिन्दुमा म तिमीहरूलाइ सोध्‍न चाहन्छुः यी वचनहरू सुनेपछि के तिमीहरू परमेश्‍वरको महानता खाली कागजमा लेखिएका खोक्रा शब्दहरू मात्र हुन् भन्‍ने सोच्छौ? के परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन खोक्रा शब्दहरू मात्र हुन्? होइनन्! अवश्य होइनन्! उहाँले आफ्नो काम गर्नुहुँदाको हरेक समय व्यवहारिक अभिव्यक्ति प्राप्त गर्ने परमेश्‍वरको सर्वोच्चता, महानता, पवित्रता, सहनशीलता, प्रेम आदि जस्ता परमेश्‍वरको स्वभाव र सारका विवध पक्षहरूको हरेक विवरण मानिसप्रति भएको उहाँको इच्छामा समाविष्ट छन् र हरेक व्यक्तिमा ती पूरा गरिन्छन् र प्रतिबिम्बित हुन्छन्। तैँले यसको अनुभव पहिले गरेको वा नगरेको भए पनि परमेश्‍वर हरप्रकारले हरेक व्यक्तिको हेरचाह गर्ने स्वभावको हुनुहुन्छ र उहाँले हरेक व्यक्तिको हृदयलाई चेतावनी दिन र हरेक व्यक्तिको आत्मालाई ब्युँझाउनको निम्ति उहाँको निष्कपट हृदय, बुद्धि, र विभिन्‍न विधिहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो निर्विवाद तथ्य हो। यहाँ जति जना मानिस बसिरहेका भए तापनि परमेश्‍वरको सहनशीलता, धैर्य, र सुन्दरताप्रति हरेक व्यक्तिको आफ्नै अनुभव र अनुभूतिहरू छन्। परमेश्‍वरबारेका यी अनुभवहरू र उहाँप्रतिका यी अनुबभूति र बुझाइहरू छोटकरीमा भन्दा यी सबै सकारात्मक कुराहरू परमेश्‍वरबाट आएका हुन्। यसैले हरेक व्यक्तिका परमेश्‍वरबारेका अनुभवहरू र ज्ञानलाई एकीकृत गरेर र तिनीहरूलाई आज हामीले पढेका बाइबलका खण्डहरूसँग मिलाउँदा, के तिमीहरूसँग अब परमेश्‍वरको बारेमा अझ वास्तविक र उचित बुझाइ हुन्छ?
यो कथा पढेपछि र यस घटनाद्वारा प्रकट गरिएको परमेश्‍वरको केही स्वभाव बुझेपछि, तिमीहरूमा परमेश्‍वरप्रति कस्तो किसिमको नयाँ आदर आउँछ? के यसले तिमीहरूलाई परमेश्‍वर र उहाँको हृदयको बारेमा गहिरो बुझाइ दिएको छ? के अहिले नोआको कथा फेरि पढ्दा तिमीहरूले फरक अनुभव गर्छौ? तिमीहरूको विचारमा यी बाइबलका पदहरूको बारेमा सङ्‍गति गर्नु अनावश्यक थियो? अब हामीले तिनीहरूको बारेमा सङ्‍गति गरेका छौँ, के तिमीहरूलाई यो अनावश्यक थियो भन्‍ने लाग्छ? यो निश्‍चय नै आवश्यक थियो! हामीले पढेको कथा भए तापनि यो परमेश्‍वरले गर्नुभएको कामको सत्य अभिलेख हो। मेरो लक्ष्य तिमीहरूलाई यी कथाहरूका विवरणहरू वा यस पात्रलाई बुझ्‍न सक्षम तुल्याउनु होइन, न त तिमीहरूले गएर यस पात्रको बारेमा अध्ययन गर्न सक भन्‍ने नै हो र निश्‍चय नै तिमीहरूले गएर बाइबल अध्ययन गर भन्ने हुँदै होइन। तिमीहरूले बुझ्दै छौ? के यी कथाहरूले परमेश्‍वरबारेको तिमीहरूको ज्ञान बढाए? हङकङका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीलाई भन्‍नुहोस्। (परमेश्‍वरको प्रेम हामीमध्ये कोही पनि प्रष्ट मानवहरूमा नभएको हामीले देख्यौँ।) दक्षिण कोरियाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीलाई भन्‍नुहोस्। (मानिसप्रतिको परमेश्‍वरको प्रेम वास्तविक हो। मानिसप्रतिको उहाँको प्रेममा उहाँको स्वभाव र उहाँको महानता, पवित्रता, सर्वोच्चता र उहाँको धैर्य छ। हाम्रो लागि यो गहिरो बुझाइ प्राप्त गर्ने कोसिसको लायक छ।) (सङ्‍गति गर्दै गर्दा, एकातिर म परमेश्‍वरको धर्मी र पवित्र स्वभाव देख्‍न सक्छु र मानवजातिप्रति परमेश्‍वरको चासो, मानवजातिप्रति परमेश्‍वरको दया पनि म देख्‍न सक्छु र परमेश्‍वरले गर्नुहुने सबै कुरा र उहाँसँग भएका सबै सोच र विचारहरूले मानवजातिप्रतिको उहाँको प्रेम र चासोलाई प्रकट गर्छन् भन्ने कुरा म देख्न सक्छु।) (मानवजाति गम्भिर हदसम्म दुष्ट भएको कारण परमेश्‍वरले संसारलाई नष्ट गर्नको निम्ति जलप्रलयको प्रयोग गर्नुभयो भन्‍ने मेरो विगतको बुझाइ थियो, र परमेश्‍वरले यस मानवजातिलाई घृणा गर्नुभएको कारण तिनीहरूको विनाश गर्नुभएको जस्तो लाग्थ्यो। आज नोआको कथाको बारेमा परमेश्‍वरले बताउनुभयो र परमेश्‍वरको हृदय पीडाले भरिएको थियो भन्‍नुभएपछि मात्र परमेश्‍वरले यस मानवजातिलाई जान दिन अनिच्छुक हुनुहुन्थ्यो भन्‍ने महसुस मलाई भयो। मानवजाति अत्यन्तै अनाज्ञाकारी भएको कारणले मात्र परमेश्‍वरसँग तिनीहरूलाई नष्ट गर्नुबाहेक अर्को छनौट बाँकी रहेन। वास्तवमा यस समय परमेश्‍वरको हृदय धेरै नै दुःखी थियो। यसबाट उहाँको स्वभावमा मानवजातिप्रति परमेश्‍वरको वास्ता र चासो म देख्‍न सक्छु। यो मलाई पहिले थाहा नभएको कुरा हो।) धेरै राम्रो! तिमीहरू अर्को चरणमा जान सक्छौ। (यो कुरा सुनेपछि म धेरै प्रभावित भएँ। मैले विगतमा बाइबल पढेको थिएँ तर आजको जस्तो अनुभव कहिले पनि गरिनँ जहाँ परमेश्‍वरले प्रत्यक्ष रूपमा यी कुराहरूको चिरफार गर्नुहुन्छ ताकि हामीले उहाँलाई चिन्‍न सकौं। परमेश्‍वरले हामीलाई यसरी बाइबल हेर्न सँगसँगै डोर्‍याउने कामले मानिसको भ्रष्टताको अगाडि मानवजातिप्रति परमेश्‍वरको सार प्रेम र वास्ता थियो भन्‍ने कुरा जान्‍न मलाई सक्षम तुल्यायो। मानिस भ्रष्ट भएको समयदेखि वर्तमानका अन्तिम दिनहरूसम्म पनि परमेश्‍वरको स्वभाव धर्मी नै छ र उहाँको प्रेम र वास्ता अपरिवर्तनीय नै छ। सृष्टिदेखि अहिलेसम्म मानिस भ्रष्ट भए तापनि परमेश्‍वरको प्रेमको सार कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन भन्‍ने यसले देखाउँछ।) (समयको परिवर्तन वा उहाँको कामको स्थानको कारण परमेश्‍वरको सार बदलिनेछैन भन्‍‍ने कुरा आज मैले देखेँ। मैले यो पनि देखेँ कि मानिस भ्रष्ट भएपछि परमेश्‍वरले संसारको सृष्टि गरिरहनुभएको होस् वा यसलाई नष्ट गरिरहनुभएको होस्, उहाँले गर्नुहुने हरेक कुराको अर्थ छ र त्यसमा उहाँको स्वभाव रहन्छ। यसैले परमेश्‍वरको प्रेम अनन्त र अपरिमेय छ भन्‍ने मैले देखेँ र अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उल्लेख गरेझैँ उहाँले संसारको विनाश गर्दा मानवजातिप्रति उहाँको वास्ता र दया पनि मैले देखेँ।) (यी कुराहरूको बारेमा मलाई पहिले निश्‍चय नै थाहा थिएन। आज यो कुरा सुनेपछि परमेश्‍वर साँच्चै विश्‍वसनीय, साँच्चै भरोसायोग्य र विश्‍वासको योग्य र उहाँ वास्तवमा नै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्‍ने महसुस मैले गरेँ। परमेश्‍वरको स्वभाव र प्रेम वास्तवमा यति ठोस छ भनेर मेरो हृदयमा साँच्चिकै सराहना गर्न सक्छु। आजको कुरा सुनेपछि मैले गरेको अनुभूति यही हो।) अत्यन्तै राम्रो! यस्तो लाग्छ तिमीहरूले सुनेका कुरा हृदयमा राखेका छौ।
आज हामीले तीन विषयहरूमा छलफल गर्‍यौँ। यी तीन विषयहरूको बारेमा गरिएको हाम्रो सङ्‍गतिबाट हरेकले धेरै कुराहरू प्राप्त गरे भन्‍ने मेरो भरोसा छ। यी तिन विषयहरूद्वारा मैले व्याख्या गरेका परमेश्‍वरका विचारहरू वा मैले उल्लेख गरेका परमेश्‍वरको स्वभाव र सारले परमेश्‍वरको बारेमा मानिसहरूको कल्पना र बुझाइलाई रूपान्तरण गरेको छ, परमेश्‍वरप्रतिको हरेकको विश्‍वासलाई पनि रूपान्तरण गरेको छ, र यसअतिरिक्त हरेकले आफ्नो हृदयमा आदर गरेका परमेश्‍वरको तस्बिरलाई रूपान्तरण गरेको छ भनेर म निश्‍चयताका साथ भन्‍न सक्छु। जेसुकै होस्, बाइबलका यी दुई खण्डहरूमा परमेश्‍वरको स्वभावको बारेमा तिमीहरूले जे सिकेका छौ ती कुराहरू तिमीहरूका निम्ति फाइदाजनक छन् भन्‍ने मेरो आशा छ र तिमीहरू यहाँबाट फर्केर गएपछि यसको बारेमा चिन्तन-मनन गर्नेछौ भन्‍ने आशा गर्छु। आजको सभा यही समाप्त हुन्छ। फेरि भेटौँला।
नोभेम्बर ४, २०१३
अघिल्लो: परमेश्‍वरको स्वभाव अनि उहाँको कामले हासिल गर्ने नतिजाहरूलाई कसरी चिन्ने
अर्को: परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम् ३